SAROTRA NY FANADINANA BAKALOREA : Misy mitsoaka an-daharana ireo mpiadina
Amin’ny ankapobeny tena mampikaikaika ireo mpanala fanadinana bakalorea ny fahasarotan’ny laza adina tamin’ity fanadinana ity. 28 juillet 2017
Ny taranja matematika no nampikolay azy ireo ary nisy mihitsy ny nitsoaka an-daharana vokatr’izany.
Raha ny tetsy amin’ny ivon-toeram-panadinana etsy amin’ny lisea Maoderina Ampefiloha dia mpiadina iray tao amin’ny sokajy siantifika no tsy niverina nanohy ny ambin’ny fanadinana intsony rehefa nahavita ny laza adina matematika. Heverina ho diso fanantenana tanteraka izy ary tsy manana faharisihana intsony ny amin’ireo taranja hafa sisa tavela.
“Taratasy fotsy no nateriny nandritra ny fanatanterahana ny laza adina matematika ary taorian’io tsy niverina namonjy ny efitranom-panadinana intsony izy”, hoy ny fanazavana nomen’ny lehiben’ny ivon-toeram-panadinana etsy amin’ny LMA.
Ankoatra ireo nitsoaka an-daharana dia betsaka ihany koa no tsy tonga nanatrika ny fanadinana satria nahatratra 78 isa izy ireo teo anivon’ny ivon-toeram-panadinana LMA manokana. Raha oharina tamin’ny taon-dasa dia sarotra avokoa ny laza adina tamin’ireo fanadinam-panjakana tamin’ity taom-pianarana ity. Mampitsitotongavana ny tahan’ireo afaka fanadinana anefa izany, saingy voalazan’ny minisitera tompon’andraikitra fa tanjona ny hamerenana ifotony fari-pahaizan’ny ankizy ary tsy any amin’ny fahabetsahan’ireo afaka fanadinana no hihaza- kazahana.
NILAMINA NY FANADINANA BAKALOREA AMBATONDRAZAKA
2017-07-28 14:14:34 par 0345375846
Tampilaminana tanteraka no nanaovan’ny ireo mpidina ny bakaloria taty amin’ny faritra Alaotra mangoro,na dia teo aza ireo nanadino ny taratasy fiantsoana na convocation.Raha ny fahitàn’ireo mpiadina siantifika aloha,dia somary sarotsarotra ihany ny taranga matematika.Mifanohitra amin’izay kosa hoan’ireo sokajy A satria dia hita hovelombolo ihany ny ankamaroany.Mirary ireo mpanala ny fanadinana rehetra mba samy hahita fahombiazana hatrany.